Folder တွေကို စိတ်ကြိုက် Color ချိန်းကြမယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Folder တွေကို စိတ်ကြိုက် Color ချိန်းကြမယ်…
Folder တွေကို စိတ်ကြိုက် Color ချိန်းကြမယ်…
Posted by lu ta lone on May 6, 2010 in Computers & Technology, Other - Non Channelized, Software & Links | 10 comments
Folder တွေကို စိတ်ကြိုက် Color ချိန်းကြမယ်... လူတလုံး အာဘော်...
ကဲ ..မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ .. folder လေးတွေကို ဒီအတိုင်းထားထားရင် .. သူ့ Default အရောင်လေးပဲ …ပေါ်နေမှာပေ့ါ.. (အော်. အဲ့ဒါတော့ မင်းပြောမှ လားလို့ တော့ မပြောနဲ့ ပေ့ါ.. နော်.. ) အဲ့ဒါကြောင့် မိမိ PC ထဲက folder လေးတွေ လှပသွားဖို့ .. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်လေးတွေ နဲ့ ပြောင်းကြည့်ရအောင်ဗျာ… ဒီမှာ ပြထားသလိုပေ့ါ ..
ဘာမှ အများကြီးလုပ်စရာ မလိုပါဘူး ဗျာ..အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ FolderHighLight ဆိုတဲ့ ဟာလေးကို Install လ်ိုက်ရုံနဲ့ ရပါပြီ ..ပြီးရင် ပြောင်းချင်တဲ့ folder ပေါ်မှာ right click -> folder high light ထဲက ကြိုက်တဲ့ အရောင်လေးတွေ ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ ..
အဲ့ folderhighlight လေးနဲ့folder ကို အလှဆင် ပြီးသကာလမှာ …. အရင်က ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Folder Background Change ပြီး သုံးကြည့်လိုက်ကြဗျာ.. Folder တွေ အရမ်း မိုက်သွားလိမ့်မယ်…. အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေကို လက်တို့ လိုက်ပါဦး…
If somebody encounters difficulties to find “download link” for above article,
Please go to the following page as it explained with diagrams & it was included download link.
( as it was looked initial/original of this Article )
it is useful and wanna get to know how to change the folder background, too. Pls advice.
ဟုတ်တယ်နော် folder ကတော်တော်လှသွားမယ်ထင်တယ် ကျေးဇူးပဲနော်.
very nice thanks you very very much
ကိုတလုံး post အသစ်မတွေ့ တာကြာပီးနော်
အရင် Folder Background Change Link လေးပြန်ပေးပါလား :hee: